“Waa mid kamid ah guulaheena ugu muhiimsan xiliciyaareed kan” – Chamberlain oo ka hadlay guushii Burnley – Gool FM
“Waa mid kamid ah guulaheena ugu muhiimsan xiliciyaareed kan” – Chamberlain oo ka hadlay guushii Burnley
(London) 03 Okt 2016 Dhaliyihii goolka guusha ee Arsenal xalay ay uga adkaatay dhigeeda Burnley ee Alex Oxlade-Chamberlain ayaa sheegay in guushaas ay tahay mid kamid ah guulaha lagu xasuusan doono xiliciyaareed kan.
Alex Oxlade-Chamberlain ayaa sheegay in guushii xalay ay ka caawinayso kooxdiisa inay hesho kalsooni badan kulamada soo socda.
“Waxaan arkay kubadda oo igu soo socota waan shuuday oo kaliya, ma haysan waqtibadan oo aan ku fikiro, tababaruhu wuxuu nagu yiri ha argagixina, waxaan u dagaalanay sidii aan gool ku dhalin lahayn” ayuu yiri Alex Oxlade-Chamberlain.
“Waxaan samaynay isku dayo anaga oo dadaalayna, kadibna waxaan dhalinay goolka, wuxuu ahaa kulan adag, Burnley si adag ayeey u difaactameen, laakiin ugu danbayntii guul ayaan gaarnay”.
“Waxa muhiimka noo ah waa helida 3-da dhibic, dhabtii guushaan waa mid kamid ah guulaheena ugu muhiimsan xiliciyaareed kan”.
Torino oo beegsanaysa inay wada iibsato Joe Hart
Messi oo isha ku haaya inuu taam u noqdo kulanka Man City